Mayelana noTom - Ummeli Wezezimboni Ongcono Kakhulu
Umdabu wasePeoria, e-Illinois, UThomas Howard uthweswe iziqu e-Illinois Wesleyan University naseMarquette University Law School.
Kuwo wonke lo mkhuba wakhe, uthole imiklomelo eyizigidi zamadola, waqinisa izinqumo, futhi wavikela amalungelo ekhasimende lakhe ngenkathi eluleka ngokuthi angasinciphisa kanjani isikhathi nezindleko ezitholakele ekusebenziseni izinkontileka ngokusebenzisa amacala.
Usebenza e-Illinois State Bar Association's Commercial Banking, Immigration and Cannabis Section Councils futhi unikezwe kokubili njenge I-Rising Star ngama-Super Lawyers futhi njengoMmeli Oqhamuka Ngabameli Bokuhola kusukela ngo-2015.
Ngo-2013, uTom wayefuna ukuvuza abantu ngokuthenga a inoveli ayibhala ngo-2010 emithethweni yensangu futhi ngavela nombono wokufaka isicelo sobuholi bezepolitiki. Yena kanye nomtshali-zimali bakha i-LLC futhi bakha uhlelo lokukhuthaza ezombusazwe, Ama-callitics
Waqala ukuzifundisa ukufaka amakhodi nokuthi isoftware ne-inthanethi zisebenza kanjani. Usebenze futhi wabambisana namaqembu kuwo wonke umhlaba, wenza inethiwekhi yabathuthukisi abathembekile angathembela kubo kwizixazululo zesoftware yokwakha kanye nonjiniyela kuzingxenyekazi zonke, ngaphezu kokumaketha okubaluleke kakhulu nezinto zokwakha wonke amabhizinisi anobukhona be-inthanethi adinga.
Njengoba idatha isesandleni, uTom Howard ubuyele emaqenjini ayewakhile noStumari futhi waqala ukuklama isisombululo esisha sezinkinga ezibandakanya izinkampani zabokufika. Akufanele nje kuphela ukuthi ama-visa ahambisane nemithetho eshintshashintshayo evela kwa-Customs and Immigration Services kanye noMongameli wamanje, kepha futhi nesimo somnikazi we-visa kufanele siphathwe ngaso sonke isikhathi ukuze sihambisane.
Ngesikhathi sakhe sokuphumula eminyakeni yakhe yokuqala embalwa esebenza njengomthetho, uTom Howard wacwaninga ngomlando nomthetho wamacala maqondana nokusebenza kwemithetho yensangu yesizwe. Washicilela inoveli evela ocwaningweni ngaphansi kwegama lakhe, uHoam Rogh. Njengoba phambilini wayeshicilele ezinye izincwadi ezimbili azibhala ngesikhathi sakhe sokuphumula esikoleni sezomthetho.
UTom Howard wenze ucwaningo ngenkuthalo futhi wakhonza i izidingo zomthetho we-cannabis zomthetho kusukela ngo-2010. Ubelokhu eshicilela kaningi ezindabeni ezahlukahlukene imboni ebhekene nazo futhi emele izikhungo zezezimali nezinsangu embonini entsha neyinkimbinkimbi. Ku-2018, uTom Howard uqale a Isiteshi se-YouTube futhi wethula le webhusayithi ukukhulisa amandla akhe okuxhumana futhi wakhonza imboni ye-cannabis.